Izindaba - Isingeniso esifushane mayelana nobuchwepheshe bokuxuba nokusabalalisa kwe-ultrasonic fluid
Isingeniso esifushane mayelana nobuchwepheshe bokuxubana nokusabalalisa kwe-ultrasonic fluid
Ubuchwepheshe bokuxuba nokusabalalisa obuketshezi obunamandla obuketshezi buhlobene ne-jomo homogenizer, ikakhulukazi kumanzi we-jet homogenizer ashukumisayo. Ubuchwepheshe bayo obuyisisekelo i-homogenizer ye-jet homogenizer enamandla kakhulu.
Itheknoloji yokuxuba nokusabalalisa yendabuko imvamisa ubuchwepheshe be-paddle, futhi ubuchwepheshe bethu bokuxuba nokusabalalisa ubuchwepheshe be-ultrasonic obunamandla obunamandla.
Ngokomgomo wesizukulwane se-ultrasound, i-ultrasound ingahlukaniswa ngezigaba ezimbili: i-ultrasound kagesi ne-hydrodynamic ultrasound. Yize i-electro-ultrasonic jet homogenizer inomphumela omuhle we-homogenization kuzinhlayiya eziwuketshezi, idinga imishini kagesi yangaphandle, izindleko eziphakeme, ukusetshenziswa kwamandla amakhulu, namandla amancane okucubungula, ngakho-ke ayifanele ukusetshenziswa okubanzi embonini; ukusetshenziswa kwe-hydrodynamic ultrasonic jet homogenizer Fluid (imvamisa igesi noma uketshezi) isetshenziswa njengesisusa sokuthokozisa umhlanga ku-homogenizer yendiza ukudlidliza. Lapho imvamisa yangaphakathi ye-fluid medium jet ihambisana nobuningi bemvelo bomhlanga, i-resonance yenzeka futhi kukhishwa amagagasi e-ultrasonic. Futhi ngaphansi kwesenzo sokuqina komsindo okuphezulu i-ultrasound, kukhiqizwa izinga lokushisa eliphakeme, elenza ngcono amandla okuxuba oketshezi oluyinhloko noluketshezi lwesibili, kunciphise usayizi wezinhlayiyana ze-atomization uketshezi, kukhuthaza ukuqhubeka kokuthintana kwamakhemikhali, kusheshise ikhono lokuhlukahluka uketshezi ukungena komunye nomunye, futhi kusheshisa inqubo yokuxuba, Ukuthuthukisa ukufana kokuxubana, futhi izinkulungwane zamagagasi ashaqisayo asemkhathini avele enkundleni ye-cavitation, aqhubeke abe nomthelela enhlanganisweni yoketshezi, aqede uketshezi lwesibili lube izinhlayiya ezilingana ne-micron noma i-nanometer, bese ubasabalalisa ngokulinganayo kuketshezi oluyinhloko, Yenza isigaba esihlakazekile.
Amaphrojekthi wokusebenza womkhiqizo wamanje asebenzisa ubuchwepheshe bokuxuba nokusabalalisa kwe-ultrasonic oketshezi:
1. I-Hydrodynamic ultrasonic hydrogen-rich device yokulungiselela amanzi
2. Idivayisi yokulungiselela ukusabalalisa i-Hydrodynamic ultrasonic graphene
3. Uhlelo Lokulungiselela Ukuphuza Utshwala Amandla e-Fluid
4. Uhlelo lokulungiselela amanzi lwe-Hydrodynamic ultrasonic elincane
5. uketshezi lwamandla we-ultrasonic treatment system